के बुद्ध एयरको जहाजमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र र कोमल पनि थिए ? पाइलट शेर्पासँगको फोटो यसरी भयो भा’इर’ल (भिडियो सहित):: Mero Desh
के बुद्ध एयरको जहाजमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र र कोमल पनि थिए ? पाइलट शेर्पासँगको फोटो यसरी भयो भा’इर’ल (भिडियो सहित)
Published on: १२ आश्विन २०७८, मंगलवार ०३:२४
काठमाडौं – काठमाडौंबाट विराटनगरका लागि उडेको बुद्ध एयरको जहाज अवतरण हुन नसकेर पुनः काठमाडौं फर्किइयो । झण्डै दुई घण्टा आकाशमा ‘होल्ड’ गरेपछि जहाज काठमाडौंस्थित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सुरक्षित अवतरण गराइएको छ । उक्त जहाज क्याप्टेन एजी शेर्पाले उडाएका थिए । जहाजमा चालक दलका सदस्यसहित ७७ यात्रु सवार थिए ।
सुरक्षित अवतरण गरेपछि क्याप्टेन शेर्पासहितको टोली लाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कर्मचारी र प्रहरी ले स्वा गत गरेका छन् । जहाजबाट ओर्लिएका क्याप्टेन शेर्पालाई अंकमालगर्दै सबैको शुभेक्षा प्रकट गरेका छन् । शेर्पाको साहसिक, धैर्यवान र कुशल कार्यले नै ७७ जनाको सुरक्षित फर्किएका हुन् ।
तर, सोमबार साँझबाट पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह, पूर्वरानी कोमल शाह, बुद्ध एयरका क्याप्टेन आङगेलु शेर्पासहित बुद्ध एयरका कर्मचारीसहितको एउटा तस्वीर भाइ’रल भएको छ । के पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र र पूर्वरानी कोमल त्यो जहाजमा थिए ? स्वदेश नेपालले फ्याक्ट चेक गरेको छ ।फेसबुकको एउटा ग्रुपमा प्रेम कोइराला लेख्छन्,
‘काठमाडौंबाट विराटनगर उडेको बुद्ध एयरको जहाजमा सवार राजारानीसहित सम्पूर्णको जीवन सुरक्षित रह्यो, राजारानीसँगै रहेकाले प्रायः व्यक्तिहरूलाई ठुक्क थियो, जहाँ राजा छन्, त्यहाँ भगवान रहन्छन् । जय देश जय नरेश । ’फेसबुकमै पार्वती थापाले लेखेकी छिन्, ‘साहसी क्याप्टेन आङगेलु शर्पाज्यू नमन!
आज बुद्ध एयरको जहाजलाई ठूलो दु’र्घट’नाबाट जोगाएर ७७ जनाको ज्यान ब’चाउने भगवान!’ उनले पनि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको तस्वीर पोस्ट गरेकी छिन् । फेसबुकमा अर्को पोस्ट छ, विशाल राजभण्डारीको । उनी लेख्छन्, ‘जहाँ राजारानी हुन्छ त्यहाँ भगवानको बास हुन्छ भन्ने सही सावित भयो । आजको बुद्ध एयरमा राजारानी पनि सवार थिए, त्यही भए र भगवान श्री पशुपतिनाथको कृपाले दु’र्घ’टना हुनुबाट जोगियो ।
’के ज्ञानेन्द्र र कोमल विमानमा थिए ?दुई घण्टादेखि काठमाडौंको आकाशमा होल्ड भएको जहाज सकुशल अवतरण भयो । त्यसपछि सबै यात्रु गन्तव्यतिर लागे । कोही भिआइपी छन् कि भन्ने चासो थियो । किनभने दिउसोको कार्यक्रमका लागि राजनीतिक दलका नेताहरू बिहानै विराटनगर जाने गरेका छन् । अब कुरा गरौं भाइरल भएको तस्वीरको ।
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र र पूर्वरानी कोमलसँग क्याप्टेन शेर्पाले फोटो खिचेका रहेछन् । तर, सोमबा र होइन । भा’इरल भइरहेकामध्ये एक तस्वीरमा सन् २०१० अक्टुबर ११ तारिख उल्लेख छ । अर्को तस्वीर सन् २०१२ तिरको भन्ने बुझिएको छ । त्यस कारण पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र र पूर्वरानी कोमलको उक्त तस्वीर सोमबारको नभएको पुष्टि भएको छ ।
फोटो भा’इरल भ एपछि स्वदेश नेपालले पूर्वराजाका सञ्चार सचिव फणिराज पाठकलाई सम्पर्क गरेको थियो । पाठकले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र काठमाडौंमै रहेको बताए । साथै ज्ञानेन्द्र उक्त जहाजमा नरहेको पनि पुष्टि गरे । त्यसैले सोमबार भाइ’रल भइरहेको तस्वीर पूरानो हो भन्ने पुष्टि हुन्छ । यद्यपि, नेपालमा राजतन्त्र गए पनि ज्ञानेन्द्र पक्षधर सानो जमात अहिले पनि छ ।
ज्ञानेन्द्रका अनेक तस्वीर भा’इरल बनाउने काम सोही समूहको हो ।यसअघि, जहाज विराटनगरमा ल्याण्ड हुन नसकेर काठमाडौं फर्किएसँगै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हाइअलर्ट गरिएको थियो । विमान फोर्स ल्याण्डका लागि एम्बुलेन्स दमकल विमानस्थलमा राखिए को थियो ।यसरी भयो पाइलटको स्वागत (हेर्नुहोस् भिडियो)